Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Sehatra fahalalana sosialy vaovao natombok'i Diem
Diem, safidy haino aman-jery sosialy vaovao, manomboka hamorona sehatra sosialy nomerika ho an'ny vehivavy sy ny olona tsy binary mba hifandray amin'ny teboka iraisan'ny besinimaro, miresaka ny traikefa ratsy hitan'izy ireo matetika amin'ny tambajotra sosialy am-perinasa. Ny teknolojikan'i Diem dia miorina amin'ny fifandraisan'ny vondrom-piarahamonina sy ny fizarana fahalalana tena izy, miala amin'ny atiny voarafitra sy azo tanterahina izay ampifandraisinay amin'ny media sosialy sy amin'ny làlan'ny traikefa manokana sy mitovy izay ny fahalalana no endrika faratampon'ny vola sosialy.
Diem dia tao amin'ny beta hatramin'ny Janoary 2021 ary nanangona lisitra fiandrasana olona maherin'ny 20,000. Mialoha ny famoahana ampahibemaso, Diem dia nandidy tamim-pitandremana ireo “Hostes mpanorina” miisa 100+ mba hizara ny zavatra niainany manokana sy ny fahitany fahitana amina vondrom-piarahamonina mifototra amin'ny fahalianana ao anatin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny endrika fampiraisana sy tsy fitovizan-kevitra. Ny Folks ao Diem dia ho afaka hahita Mpampiantrano amin'ny sehatra maro samihafa toy ny mpanolotsaina ara-bola, mpandraharaha ary OBGYN. Ny mpampiantrano dia misy koa ny mpamorona mpamorona, mpandraharaha ary mpitarika ny indostria anisan'izany i Kirsty Godso, Sabia Wade, Lauren Maillian, ary Jaclyn Johnson, izay samy miditra ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina an'ny orinasa ihany koa mba hamolavola ny sehatra sosialy ho avy izay tian'izy ireo hiditra. .Nizara i Johnson, "Faly be aho nampiantrano sy hampiasa vola ao amin'ny Diem, rehefa nanangana orinasa mifantoka amin'ny vehivavy aho, fantatro fa mila vondrom-piarahamonina virtoaly hifaneraseran'ireo olona sy manam-pahaizana amin'ny sehatra natokana ho azy ireo."
Ny iray amin'ireo fotokevitra fototry ny Diem dia ny tsy fananganana teknolojia tsy ilaina sy mampiankin-doha, satria ny hoavin'ny media sosialy dia tsy ny fanangonana volomaso amin'ny alàlan'ny fizarana fampisehoana. Ny momba ny famoronana sehatra misy maodelim-bola ahazoana tombony amin'ny olona ihany koa. Amin'ny ho avy, Diem dia mikasa ny hanavao ny teknolojia antitra sy roa amin'ny tambajotra sosialy ary ny teknolojia fanaovan-tsosialy izay hita matetika amin'ny lalao sy AR / VR mba hamboly vondrom-piarahamonina telo heny tena ara-tsosialy.
Maitree Mervana Parekh, Investor ao amin'ny Acrew, dia manazava fa, "Ny vondrom-piarahamonina dia mitarika ny fananan'ny olombelona, ​​ary ny teknolojia dia naneho ny fahafahany manana loharano mahery amin'ny fambolena an'io. Na izany aza, ny teknolojia izay mametraka ny laharam-pahamehana ny fampidirana sy ny fahatsapana dia tsy mbola lohalaharana. Izany no mahatonga ahy ho faly amin'ny Diem. Manosika ny fetran'ny “tambajotra sosialy” io ary mamolavola traikefa ara-tsosialy lalina miainga avy eny ifotony ahafahan'ny mpikambana ao aminy mampifandray, mifanakalo fahalalana ary mivoatra amin'ny fomba fanahy iniana sy tafiditra. ”
Fantatsika rehetra fa ny haino aman-jery sosialy dia misy akony lehibe amin'ny fomba fiainantsika, ny fiaraha-miasa ary ny fifandraisantsika amin'izy samy izy, kanefa, ireo sehatra ambony androany dia noforonin'ny lehilahy avokoa. Midika izany matetika fa ny orinasa media sosialy dia manao politika tsy manimba sy manao firaisana ara-nofo, mamela toerana kely kokoa ho an'ny vehivavy sy ny olona tsy binary hiaina amin'ny tontolo virtoaly. Ny manam-pahaizana momba ny fiarahamonina, Abadesi Osunsade, dia nanambara fa, "Amin'ny maha vehivavy anao, ny sehatra media sosialy manjaka dia nanomboka nahatsapa ho trandrahana, mamporisika antsika ho marefo eny amin'ny habakabaka noho ny firotsahana. Diem dia momba ny fiarahamonina ary tsy misy fandaharam-potoana miafina. ”
Diem dia misokatra ho an'ny besinimaro mandritra ny Oktobra 2021. Ny ekipa monina any New York dia orinasa portfolio Techstars NYC '20, notohanan'ny $ 900,000 amin'ny famatsiam-bola mialoha ny voa miaraka amin'ny fandraisana anjara avy amin'ny Xfactor Ventures, Acrew ary anjely mitarika toa ny mpanorina ny Cre & Cultivate , Jaclyn Johnson ary Discord Executive, Amber Atherton.